Payment instructions - Soomaali / Somali | Saint Paul, Minnesota
Payment instructions - Soomaali / Somali
Fiiga iyo Ikhtiyaarada Qiimaynta bixinta
A. Ku dir boosta jeeg ama amar lacag ah cinwaanka soo socda:
Jeegga ama amarka lacagta waa in loo sameeyaa City of Saint Paul- Office of Financial Services. Fadlan kudar qaansheegta hore oo kuqoro lambarkaaga Aqoonsiga Hantida jeegaaga. Haddii aadan haysan qaansheegta bilowga ah, fadlan sheeg qiimaynta ay bixinnuhu tahay.
B. Ku bixi online-ka akoonkaaga jeegga / keydinta. Ma jiro lacag dheeraad ah.
1. Booqo Bogga Qiimaynta: https://eproperty.logis.org/stpaul/assessments/search
2. Ku qor Lambarka Guriga sanduuqa koowaad
3. Ku qor Magaca Wadada sanduuqa labaad
4. Dhagsii badhanka “Search by Address.” Kani wuxuu kuu geynayaa bog muujinaya wixii qiimayn ah ee la sugayo ee guriga ku saabsan.
5. Ka eeg qiimeyn hoosta “Levied Assessments” ama “Fees and Pending Assessments”. Qiimeyn kasta oo qashinka ah ayaa u muuqan doonta “Delinquent Garbage Bill” waxayna bixineysaa muddada adeegga ee qiimeynta loogu talagalay
6. Markaad ku hesho qiimeynta su'aal, guji sanduuqa yar ee cad ee dhinaca midig-fog ee safka. Waxay noqon doontaa khaanadda ku calaamadeysan “Select to Pay.” Marka aad tan sameyso, calaamaddu waxay ka muuqan doontaa sanduuqa.
7. Qaddarka buuxa ee qiimeynta ayaa si otomaatig ah uga buuxin doonta midigta sanduuqa la calaamadeeyay. Haddii aad rabto inaad bixiso qiimeynta oo dhan, ha saxin qaddarkan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad kaliya bixinayso qayb ahaan, fadlan qor lacagta aad jeceshahay inaad bixiso.
8. Adiga oo sheegaya lacagta bixinta, hoos ugu dhaadhac sanduuqa ku yaal dhinaca bidix ee hoose ee bogga cinwaankiisuna yahay “Make Payment Online.”
9. Dhagsii badhanka kore ee buluuga ah ee ku suntan “echeck payment.” Tani waxay kuu kaxayn doontaa bog lagaaga baahan doono inaad gasho macluumaadkaaga koontada hubinta / keydinta.
10. Qeybta ku hoos qoran “Contact Information,” fadlan ku qor magacaaga, cinwaankaaga, lambarka taleefanka iyo emaylka sida soo socota:
- Magaca Hore
- Magaca Dambe
- Shirkadda (haddii la heli karo)
- Cinwaanka 1
- Cinwaanka 2 (haddi la heli karo)
- Zip Code-ka
- Telefoon Lambarka
- Cinwaanka Iimaylka
11. Marka loo eego Qaybta Habka Lacag Bixinta, fadlan marka hore geli Lambarkaaga Caadiga ah ee Bangiga ka dibna Lambarka Xisaabta Bangigaaga. Kadibna sheeg in koontadu tahay xisaab jeeg ama keyd ah adoo ku calaamadeynaya sanduuqa adoo “Checking” (koontada jeegga) ama “Savings” (koontada keydka).
12. Haddii koontadu tahay koonto ganacsi, fadlan calaamadee sanduuqa ku suntan “This is a business account.”
13. Si aad lacag u bixiso, fadlan ku dhufo “Continue.”
14. Waxaa laguu tilmaami doonaa bog kuu soo bandhigi doona dhammaan macluumaadka aad dhiibtay. Haddii ay u muuqato inay sax tahay, fadlan u rog salka hoose ee bogga oo dhagsii badhanka guduudan ee ku calaamadeysan “confirm.”
C. Online ku bixi adigoo isticmaalaya kaarka amaahda / deynta. Fiiga bangiga ee 2.49% ayaa lagu dari doonaa bixinta.
5. Ka eeg qiimeynta hoosta “Levied Assessments” ama “Fees and Pending Assessments”. Qiimeyn kasta oo qashinka ah ayaa u muuqan doonta “Delinquent Garbage Bill” waxayna bixineysaa muddada adeegga ee qiimeynta loogu talagalay.
6. Markaad hesho qiimeynta su'aasha, guji sanduuqa yar ee cad ee dhinaca midig-fog ee safka. Waxay noqon doontaa khaanadda ku calaamadeysan “Select to Pay.” Marka aad tan sameyso, calaamadda calaamaddu waxay ka muuqan doontaa sanduuqa.
9. Dhagsii badhanka buluugga ah ee korka ku calaamadeysan “Credit/Debit Cart Payment” Tani waxay kuu geyn doontaa bog lagaaga baahan doono inaad soo gasho macluumaadkaaga akoonka jeegga/ keydka.
- Magaca Koowaad
- Cinwaan 1
- Cinwaan 2 (haddii la heli karo)
11. Qeybta ku hoos qoran "Credit/Debit," fadlan ku qor magacaaga, cinwaankaaga, lambarka taleefanka iyo emaylka sida soo socota:
- Lambarka Kaarka
- Taariikhda uu dacayo (Bisha/Sannad)
- Koodhka Kaadhka Sekuyuuritiga
12. Qeybta ku calaamadeysan “Card Billing Address,” fadlan calaamadee xulashada goobada ku xigta “Use my contact information” haddii macluumaadkaaga xiriirka ee aad kor ku taxday ay yihiin isla macluumaadka xiriirka ee ku qoran kaarkaaga.
13. Haddii aysan ahayn, fadlan xulo ikhtiyaarka “Use a different address” oo buuxi meelaha soo socda ee hoose oo leh macluumaadka xiriirka ee ku taxan kaarkaaga amaahda / deynta:
- Cinwaanka 2 (haddii la heli karo)
13. Si aad lacag u bixiso, fadlan dhagsii badhanka guduudan ee ku suntan “Continue.”
D. Shaqsi ahaan ugubixi Qeybta Qiimeynta Magaalada Saint Paul ee 700 City Hall, 15 West Kellogg Boulevard.
** Fadlan la soco in tani aysan hadda macquul ahayn sababo la xiriira xaddidaadaha COVID 19. **